DF oo Muqdisho ku xirtay xubin ka tirsan is-bedel doonka Jubbaland – Hornafrik Media Network
Ibraahim Aadan Cabdikariin oo ka mid ah xildhibaanada garabka sibedel doonka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Cabdirashiid Xidig ayaa sheegay in uu xabsi guri ku yahay magaalada Muqdisho, kadib markii maanta lagala haray diyaarad u socotay gobolka Gedo.
Ibraahim oo u waramay Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in is hortaaga lagu sameeyey uu salka ku hayo arrimo qabiil, sida uu hadalka u dhigay, maadaama sida uu sheegay uu si buuxda u taageersanaa isbedellada siyaasadeed ee dowladdu ay ka wado Jubbaland.
“Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aan ka mid ahaa dadka taageersan dhaqdhaqaaqyada ay dowladdu ka wado Gedo, hada waan xiranahay dowladda Soomaaliya ayaana u xiranahay, in dowladdu xarigeyga ka bixisaa jawaab degdeg ah, dadka aan metelana halaga daayo sida lagula dhaqmaayo, hadii la iska dhaadhiciyey in dowladnimo ayaa sidaan ku dhalaneysa, wax ka jira malahan waana isku tashaneynaa”ayuu yiri xildhibankan ka tirsan is bedel doonka Jubbaland.
Sidoo kale Ibraahim ayaa sheegay in hadda uu ku xiranyahay garoonka Muqdisho meel u dhaw, isla markaana uu la yaabanyahay sababta looga khasaariyey kharashkiisa, isagoo sheegay in uu weligiisba taageersanaa xukuumadda Nabad iyo Nolol.
“Weligey waxaan dhihi jiray dadka aan metelo ka hara waxa ay san rebin dowladdu, marka hadii maanta Nabad iyo Nolol dadkii taageersanaa la kala soo caayo waa arrin qabiil” ayuu yiri Ibraahim Aadan.
Masuulkan ayaa sheegay in sababta uu kugu socday gobolka Gedo ay tahay in uu dadka ku wacyi geliyo inay taageeraan nidaamka ay dowladdu ka wado gobolka, isla markaana laga hor yimaado dad uu ku tilmaamay dowlad-diid, sida uu sheegay.